Trump ayaa beegsanaya shaqaalaha ajnabiga ah xayiraadda fiisaha cusub – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Trump ayaa beegsanaya shaqaalaha ajnabiga ah xayiraadda fiisaha cusub
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waqti dheeri ah ku kordhiyay kaararka cagaaran qaarna waxaa laga joojiyay fiisooyinka shaqaalaha kale ee ajaaniibta ah illaa dhamaadka 2020.
Shaqaalaha farsamada ee aadka u sareeya, kuwa caawiya xilliyada aan beeraha ahayn, iyo lammaaneyaasha au iyo madaxda sare ayaa saamaynaya.
Aqalka Cad ayaa sheegay in tallaabadani ay shaqooyin u abuuri doonto dadka Mareykanka ah ee dhaqaalahooda ku waxyeelleeya masiibada.
Laakiin dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in Aqalka Cad uu ka faa’ideysanayo cudurka ‘coronavirus’ si loo adkeeyo sharciyada socdaalka.
dad intee leeg ayuu saameynayaa?
Qoraal kooban oo loogu talagalay suxufiyiinta, maamulku wuxuu sheegay in xiliga qaboobaha, oo la meel mariyo dhamaadka sanadka, uu saameyn ku yeelan doono 525,000 oo qof.
Taas waxaa ku jira dad lagu qiyaasay 170,000 oo qof oo hor istaagay go’aankii ahaa in la mamnuuco qaar ka mid ah kaararka cagaaran ee cusub – kaas oo siiya deganaasho rasmi ah ajaaniibta. Aqalka Cad ayaa markii hore ku dhawaaqay in la joojinayo fiisooyinkaas bishii Abriil, amar la soo saaray in la soo afjaro Isniinta.
Trump ayaa saxeexay ka joojinta kaarka cagaaran ee socdaalka
Kuwa haysta fiisaha jira ayaa la filayaa inaysan saameyn ku yeelan doonin xayiraadaha cusub ee lagu dhawaaqay Isniinta.
Amarku wuxuu sidoo kale quseeyaa fiisooyinka H-1B, oo badankood la siiyay shaqaalaha farsamada Hindida. Dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in fiisooyinkan ay u oggolaadeen shirkadaha Silicon Valley in ay bannaanka ka dhigaan shaqooyinka Mareykanka ee mushaharka shaqaalaha ajnabiga ah ee aadka u hooseeya. Sanadkii la soo dhaafay, waxaa jiray ilaa 225,000 oo codsi oo ku tartamaya 85,000 oo dhibcood oo laga heli karo barnaamijka fiisaha H1-B.
Amarku wuxuu joojinayaa fiisayaasha H-2B badankood ee xilliyada, oo ay ku jiraan kuwa ku jira warshadaha soo-booqashada, marka laga reebo kuwa beeraha, warshadaha wax lagu karsado cuntada iyo xirfadleyda daryeelka caafimaadka.
Amarku wuxuu xaddidi doonaa fiisooyinka muddada-gaaban ee J-1, qayb ay ku jiraan ardayda jaamacadda iyo lammaaneyaal au ajnabi ah oo bixiya daryeelka ilmaha. Aqoonyahanada iyo aqoonyahanada kuma jiraan amarka. Waxaa jiri doona shuruudo lagu codsado ka dhaafitaan.
Fiisooyinka L ee maamulayaasha iyo shaqaalaha kale ee muhiimka ah ee shirkadaha caalamiga ah sidoo kale waa laga joojinayaa.
Waa maxay jawaab celintu?
Ujeeddada ayaa ah in la helo “kan ugu wanaagsan uguna ifaya” iyo “qiimaha ugu wanaagsan dhaqaalaheena”, sarkaal sare ayaa ka sheegay wicitaankii asalka ahaa.
Mark Krikorian, oo ah madaxa fulinta ee Xarunta Daraasaadka Socdaalka, oo doorbiday xayiraadaha, ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay: “Tani waa tallaabo geesinimo leh oo ay qaaday maamulka Trump si loo ilaaliyo shaqooyinka Mareykanka.”
Laakiin Ururka Xoriyadda Madaniga ee Mareykanka ayaa yiri: “Waa ka faa’ideysiga masiibada in dib loogulaabto sharciga socdaalka, halka laga dhaafayo Kongareeska.”
Siyaasadda cusub waxaa sidoo kale ka soo horjeedsaday ganacsato badan, kuwaas oo ku tiirsan shaqaalaha shisheeye.
“Maaddaama dhaqaaluhu dib u soo noqonayo, ganacsatada Mareykanka waxay u baahan doonaan dammaanad qaad ah in ay buuxin karaan dhammaan baahiyahooda shaqo,” Rugta Ganacsiga ayaa warqad ku qortay bishan iyada oo ka digaya xayiraadaha cusub.
“Si taas loo gaaro, waa muhiim in ay helaan karti gudaha iyo adduunka ah.”
Previous articleSacuudiga oo ka hadley xajka sanadkan’ sababo la xiriira cudurka ‘coronavirus’
Next articleDawlada somaaliya oo ka hadashey qarax ka dhacay xirada Turkey Som
Dowladda Somalia oo walaac ka muujisay doorashada Jubaland